Miyay Barcelona Aqbali Doontaa Inay Manchester United Kala Wareegto Xiddiga Fashilmay Ee Alexis Sanchez? Wargeyska Mundo Deportivo Oo Go'aanka Barca Shaaciyay. - GOOL24.NET
Miyay Barcelona Aqbali Doontaa Inay Manchester United Kala Wareegto Xiddiga Fashilmay Ee Alexis Sanchez? Wargeyska Mundo Deportivo Oo Go’aanka Barca Shaaciyay.
Wargeyska kasoo baxa dalka Spain ee Mundo Deportivo ayaa shaaciyay go’aanka ay kooxda Barcelona ka qabto inay dib qaab amaah ah ugula soo saxeexato xiddigii mar kooxdeeda soo maray ee Alexis Sanchez oo haatan falaago ku ah Manchester United.
Xirfada iyo waayaha ciyaareed ee Sanchez ayaa si deg deg ah hoos ugu dhacaya tan iyo markii uu kusoo biiray Man United bishii January ee 2018.
Xiddiga ree Chile ayaa kaliya dhaliyay saddex gool oo Premier League ah waxaana muuqata in uusan ku jirin qorshaha tababare Ole Gunnar Solskjaer oo la filayo in tababarenimada kooxda si rasmi ah loogu magacaabo.
Si kastaba, Mushaharkiisa waalida ah ayaa ka dhigaya mid adag inuu xiddigani si rasmi ah ugu biiro koox kale waxaana ay taa bedelkeeda saxaafada England sheegeen inuu qaab amaah ah Old Trafford kaga bixi karo.
Haddaba, Mundo Deportivo oo kasoo baxa gobolka Catalunya ayaa si xoogan u dafiray in Barca ay doonayso inay amaah kusoo qaadato xiddigeedii hore.
Iyadoo Barcelona aysan haysan dookhyo badan oo booska weerarka dhexe ah isla markaana uu Sanchez yahay mid awood u leh inuu halkaas ka ciyaaro ayaysan hadana marnaba doonayn soo laabashadiisa.
Xaqiiqada ayaa ah in 30 jirkan ay kaliya kooxo dhif ahi dooni doonaan saxeexiisa kaddib hoos u dhaciisa waana mudo kooban kaddib markii uu wacdaraha ku dhigayay Arsenal ee ay dhammaan dookhyada kooxuhu gacantiisa ku jireen.
Meesha ugu fiican ee uu Sanchez eegan karo ayaa ah horyaalka Talyaaniga sababtoo ah inuu yahay horyaalkii uu kasoo bilaabay xirfadiisa kubadda cagta Yurub markii uu kooxda Udinese matalayay.